श्रावण २, २०७४ टीकाप्रसाद भट्ट
रामेछाप — शनिबार रातिको बाढीमा परेर हराइरहेका खिम्तीका तीन जनाको अझै अत्तोपत्तो लागेको छेन । आइतबार विहानैदेखि खोजि कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्थानीयले मंगलबार मध्यान्हसम्म वेपत्ताको कुनै भेउ पाउन नसकेको हो ।
प्रकाशित : श्रावण २, २०७४ १३:२२
श्रावण २, २०७४ विकास रौनियार
जापानबारे कल्पना गर्दा तपाईं के सोच्नुहुन्छ ? कार, बुलेट ट्रेन, माउन्ट फुजी, सुमो रेस्लर, विद्युतीय सामग्री वा यी सबै ?
जापान साइकल चलाउन पनि संसारकै उत्तम स्थानमध्ये हो भन्नेचाहिँ सायदै सोच्नुभयो होला । जापानमा तपाईं जहाँ जानुस्, मानिसहरू साइकलमै आफ्नो दैनिकी चलाइरहेका भेटिन्छन् । चाहे स्कुले बालबालिका हुन् या हजुरआमाहरू, सबै उमेर समूहका जापानीहरू साइकलमा देखिन्छन् ।
जापानी सहरहरूमा साइकल स्थानीय यातायातको उत्तम साधन हुनुमा केही कारणहरू छन् । केही पूर्वाधार त केही सहरी डिजाइनका कारण । तर के देखिन्छ भने, साइकल चढ्नु जापानीको स्वभावै हो । सडकमा उनीहरूले देखाउने विनम्रता पनि उत्तिकै सराहनीय छ । साढे १२ करोड जनसंख्या भएको जापानमा सवा ७ करोड बाइसाइकल छन् । हरेक वर्ष एक करोड नयाँ साइकल बिक्री हुन्छ । यहाँ सार्वजनिक यातायात प्रभावकारी छ भने कार महँगो मानिन्छ । साइकलले जापानी यातायात पर्यावरणलाई स्वच्छ राख्न सघाएको छ । यी तस्बिरहरू जापानको राजधानी टोकियो र अर्को सहर ओसाकामा गत नोभेम्बर र डिसेम्बरमा खिचिएका हुन् ।